I-2019 CNS Ukwelashwa kweziyobisi I-GM1 Ingulube ye-Pig (37758-47-7) - APICMO
Ulwazi lwezokwelapha > I-2019 CNS unyango lwe-Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) I-Braig Brain (37758-47-7)
I-sodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside isisombululo se-neurotrophic's abbreviation GM1.
I-Gangliosides ivela kwiklasi yechungechunge le-ganglio, elibandakanya i-glycosphingolipid kunye ne-aseal acid asele kwi-chain chain. Ikhonkco ye-polysaccharide engeyiyo idibanisa ne-ceramide nge-β-glycosidic. Azenzi nje kuphela kwimbumba ye-plasmic neuronal kodwa nakwi-endoplasmic reticulum.
Nangona benza i-0.1% yobungakanani bomlinganiselo wengqondo, i-gangliosides akhawunti malunga ne-10% ye-lipids jikelele. Zenza ukuhlukaniswa kweseli, i-apoptosis, i-neuroprotection, kunye nokukhululwa kwe-neurotrophins.
I-Monosialotetrahexosylganglioside yinkomfa engahambelaniyo equkethe i-oligosaccharide chain kunye ne-ceramide. I molekyuli ibonisa zombini i-hydrophilic kunye neepoplicic properties. Ukuba unqabile emanzini nangamafutha, i-Monosialotetrahexosylganglioside ikwazi ukuhamba ngokukhawuleza ngokukhawulela igazi.
I-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside i-GM1 inendima ebalulekileyo yomzimba kwingqondo. Ibonisa iipropati ze-neuroprotective ezifana nokulungisa umonakalo we-neurological, ukubuyisela ukusebenza kunye nokuvuselelwa kwe-neurons emva kokulimala. Ngenxa yesi sizathu, i-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside inomdla ekwenzeni ukonakaliswa kwe-nervous injury. Ezinye zezifo ezichaphazelekayo ziquka ukuphazamiseka kwe-cerebrospinal, umonakalo we-cerebrovascular, kunye nokulimala kwe-cell nerve. Oku kuninzi kugxininiswe apho kukho umonakalo weseli yentsholongwane.
Imbali yeMonosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1)
Ukufunda nge-GM1 kunye nendima yayo neuroprotection ibuyela kwii-1970. Ukususela ngoko, uphando lwezenzululwazi lubonise umdla kumacandelo ngokuqhuba iinkcubeko zeseli kunye nezifundo zezilwanyana. Zonke iimvavanyo zijolise ekumiseni ukubaluleka kwe-GM1 kwiingxaki ezingenayo i-neurodeergenerative.
Ku-1986, nge-TRB SA, i-sodium yeMonosialotetrahexosylganglioside yaqaliswa ngokusemthethweni phantsi kwegama loshishino, GM-1. Njengoko iziphumo kwizifundo zezilwanyana zithembisa, oogqirha baseU.S. bavakalisa ukuphanda i-Monosialotetrahexosylganglioside i-sodium (GM1) kwimiphumo yabantu. Izifundo zezifundo zazizigulane nge-CNS ngenxa yokulimala kwentambo yomgogodla, isifo, isifo sikaPinsinson, kunye Alzheimer.
Ukususela ngoko, kuthiwa njengeArgentina ne-Italy baye bavuma isicelo sonyango njengesigqirha semithi yokunyanga kweemeko ze-neurological.
I-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside(GM1)Ifom ifom
I-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside(GM1) iinkcukacha
Inombolo yeCAS 37758-47-7
Igama lemveliso I-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) I-Brain Braig
I-Molecular Formula C77H139N3O31
IMisa yeMeleki 1546.841 gmol-1
Umzimba · Amanzi
· Kancinci kancinane kwi-methanol / chloroform
· Phantse i-ethanol ene-anhydrous
Kubonakala Ukumhlophe ukuya kumhlophe owenziwe ngomhlophe
ukugcinwa lobushushu -20 ° C
Beka ubomi kwishelufa Minyaka e mibini
pH 5.0 ukuya 6.5
Iintetho ezifanayo · Monosialoganglioside GM1
I-sodium i-Monosialotetrahexosylganglioside(GM1) Indlela yokuSebenza
I-Monosialotetrahexosyl i-ganglioside isebenza ngeendlela eziliqela. I-molecule yinto ehamba phambili yezinto ezininzi zomzimba zesimiso senzwa.
Kwi-membrane yeseli yengqondo, imisebenzi ye-Monosialotetrahexosylganglioside ukugcina ibhalansi ye-ion ngaphakathi nangaphandle kweethambo ezilumkileyo. Akukona nje ukuphucula ukungagqibekanga, kodwa kwakhona ikhupha i-sodium ne-calcium ion pump.
Kwimeko yokulimala kwentsholongwane, I-sodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) ingena ukukhusela isakhiwo se membrane. Ithobisa umsebenzi we-phospholipase i-A2, inomodare ion calcium ion, kwaye iyanciphisa ukubunjwa kwama-radical ezamahala.
I-traum traumas iphakamisa umsebenzi weprotini kinase kwiiseli, ezinokuthi zinoxanduva lwe-apoptosis. GM1 inhibits kwaye iguqula le nkqubo ngokubamba imetabolism yeeprotheni ngaphakathi kwe-cytoplasm kunye nucleus.
Phakathi kwe-mitochondrion, i-Monosialotetrahexosylganglioside isebenza ukulungelelanisa imveliso ye-ATP kunye nomsebenzi wayo we-synthase. Lukulungiselela umonakalo owenzekayo kwikhenketho yezothutho ze-electron kunye nokuphucula i-phosphorylation ye-oxidative. Ngenxa yoko, umsebenzi wokuphefumula we-mitochondrial uhlala uphilile.
I-Monosialotetrahexosylganglioside injected sodium ivuselela i-axonal ukuhluma ngokugxila kwiimeko zokukhula kwimimiselo yazo. Lo msebenzi uphinda uvuselele iimbilini ze-nervous and promotes the recovery of neurological reactions. Kwimeko yokuhlulwa kwesibini, mhlawumbi ngenxa yengozi ye-dopamine neuron, i-Monosialotetrahexosylganglioside iya kuzinzisa umphumo kwaye kuphuculwe ukusinda kwala ma-neurons.
I-Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1) Imiphumo
Nangona i-gangliosides yinto encinci engqondweni, imisebenzi yabo inkulu kakhulu. Ezi zimolekyuli zinempembelelo entle ekukhuleni, ukuvuselelwa, ukulungiswa kunye nokukhuselwa kwezibilini ze-nerve.
I-GM1 iyancipha. Ukuguga kuhambelana nokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwengqondo, ukuxakeka komzimba, ukulimala kwentsholongwane, okanye ukulahlekelwa kwememori. Ngaphandle koko, izifo ezindala ezinjenge-cerebral palsy, i-stroke, kunye ne-dementia ziyakwazi ukuphazamiseka.
Ukuxhaswa ngokukhawuleza kwe-GM1 kunceda kakhulu ukulawula amaninzi e-aging syndromes. Eminye imiphumo emihle ye-Monosialotetrahexosylganglioside (i-GM1) ibandakanya ukunyangwa kwesifo se-Alzheimer, ukuphazamiseka kwesifo, ukuhluthwa, kunye nokukhubazeka kwe-cerebral. Ngaphandle koko, isongezelelo sinciphisa ukuguga ukuphucula imemori.
Ukusetyenziswa kwe-GM1 kwizicelo zekliniki kuninzi. Ngokomzekelo, amazwe amaninzi aseYurophu nakumaMerika athatha i-monosialotetrahexosylganglioside injection sodium ukuze ilawulwe izifo ze-CNS.
Ukongezwa kukukhuthaza ukukhula kweeseli zesisongela, ukuphuhliswa kwezicubu zengqondo kunye nokukhusela izifo zengqondo. Ngokwemithi, le molekyuli exogene isebenzisa izifo zengqondo, ukulimala kweenchemical, i-cerebral hemorrhage, kunye nokulimala kweseli yesifo senzwa.
Impumelelo ebalulekileyo ekufundeni nasekusebenziseni le nkomfa kubantu yayifumanisa ukuba akukho miphumo ye-Monosialotetrahexosyl ye-ganglioside ye-sodium (GM1).
Imiphumo ye-GM1 ayikho nje ingcamango. Kwi-1976, i-Ceccarelli yamisa ukuba i-gangliosides engapheliyo ivuselela i-central nerveral nerv reeneral and repair of cells. Oku kufumanisa kwabeka isiseko esiqinileyo kubaphengululi ababonisa umdla xa befunda indima ye-GM1 kwinkqubo yesantya ephakathi.
Iziphumo zezilingo zeklinikhi ziqinisekisa ukuba i-Monosialotetrahexosylganglioside inefuthe elihle ekukhuleni, ukwahlula, ukuphuhliswa, nokuhlaziywa kwamaseli enokholo. Ukongezelela, uphando olulandelayo luya kusebenza ngokufanelekileyo kwe-GM1 kwi-neuroprotection, neuroplasticity, kunye nokuthunyelwa kwe-synaptic.
Kwimeko yexinzelelo, ukuthatha i-Monosialotetrahexosylganglioside injected sodium iya kuphazamisa inkqubo yeentetho ngeendlela ezininzi. I-molecule ayiyi kukhuthaza kuphela isizukulwana se-dendritic seeseli zesisindo kodwa sinyuse izinga lokusinda. Okwesibini, ukongezwa kunendima ebalulekileyo ekulungiseni, ukuvuselelwa kwakhona, kunye nokubuyisela ukusebenza.
I-Monosialotrahexosyl i-Ganglioside Solidum (GM1) Indlela yokwenza
Okwangoku, i-Monosialotetrahexosyl ganglioside yiyo kuphela yonyango ye-CNS eyenzekayo ngokwemvelo.
I-molecule yecandelo le-ganglioside, eligqitywa ngokukhawuleza kwi-membrane ye-neural cell. Ngenxa yomxholo wayo ocebileyo kwiisishu zeentlanzi, izazinzulu kunye neekliniki ziye zakwazi ukukhupha kwaye ziyisebenzise ekulungiseleleni i-ganglion ye-monosialotetrahexose yamayeza.
Siphucula i-Monosialotetrahexosyl ganglioside ukusuka kwiiseli zamamalia. Nangona unako ukwahlukanisa i-molecule kwi inkomo okanye kwibhokhwe, indlela ekhuselekileyo yongqingili yengqondo yengulube. Isizathu kukuba i-Monosialotetrahexosyl i-ganglioside extraction kwiinkomo okanye kwiibhokhwe ziyakuthi zihanjise izibhengezo eziphathekayo ezifana nesifo seenkomo kunye nesifo.
Izinto ezisetyenzisiweyo ze-Monosialotetrahexosylganglioside i-sodium (GM1) ithamo lebhu ibonakala, ichanekile, kwaye i-economics. Sikubonelela nge-GM1 ekhuselekileyo kunye ecocekileyo kwi-brains yengulube, njengoko indlela engadlulisi izifo kubantu.
Ngenxa yezivuno eziphezulu, sisebenzisa indlela yokuchithwa kwamanzi e-chloroform-methanol. Emva koko, senza utshintshiselwano lwe-anion kunye nokwahlukana kwe-size-excluction chromatographic. Oku kuhlanjululwa kuvelisa i-molecule ehamba kunye, eyona> 98% ecocekileyo ngeHPLC.
Imiphumo ye-Monosialotetrahexosyl ye-ganglioside ibalulekile kwizicelo zeklinikhi. Yisiza esivumelekileyo sesigqirha sokulawula iingxaki ze-neurological kunye nonyango lwengozi enkulu.
Ingaba ufuna ukuthenga i-GM1 malunga nokusetyenziswa kwezonyango okanye injongo zophando, siqinisekisa ukuba ungumkhiqizo ophezulu. Sivelisa umthamo I-monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) ipowder phantsi kwemigangatho yokulawula imgangathweni.
Schneider, JS, Roeltgen, DP, et al. (1998). Izifo ze-Parkinson: Umsebenzi ophucukisiwe Ngonyango lwe-GM1 ye-Ganglioside kwiSifundo esiLawuliweyo sePalabo.
Bansal, AS, Abdul-Karim, B., Malik, RA, et al. (1994). IgM Ganglioside I-GM1 Antibodies kwizigulane ezinezifo ezizenzekelayo ngokwasemzimbeni okanye i-Neuropathy, kunye noLawulo. Journal Journal Pathology Clinic.
Mocchetti, I. (2005). I-Gangliosides engqalileyo, i-Neuronal Plasticity ne-Repair, kunye ne-Neurotrophins.
Aureli, M., Mauri, L., Ciampa, MG, Prinetti, A., Toffano, G., et al. (2016). GM1 Ganglioside: Izifundo ezidlulileyo kunye neNgomso wexesha elizayo. I-Molecular Neurobiology.
Bian, L., Yang, J., kunye ne-Sun, Y. (2015). Ukuxhoma kunye nokuhlanjululwa kweMonosialotetrahexosylgangliosides ukusuka kwi-pig Brain ngokuCandwa kunye neCheat Chromatography.
egqithileyo ngeposi Previous: Konke Okufuneka Ukwazi NgePyridines